#BlogIndiana: Jason Falls, Ndị na-ede blọgụ na chi Google | Martech Zone
Thursday, August 13, 2009 Monday, December 29, 2014 Douglas Karr
Ọ bụ nnukwu mmalite taa Bọọgụ Indiana, na Jason Falls malitere ihe ọicesụ juụ na-asọ site na ịkụda mkpa nke njikarịcha search engine, na-etinye ụfọdụ obi abụọ banyere ghostblogging, na ịgwa ndị na-ede blọgụ na ọ dị mma ịgbaso iwu. Isi okwu Jason bu ihe omimi na nke zuru oke… mana ndia bu ihe ndi rapaara na craw.
Ọ dịkarịa ala otu n'ime ndị enyi m nwere ike ịchọpụta mmeghachi omume m… na m nwere abụọ ndị mmụọ mmụọ ịnọdụ ala n'azụ m ji n'aka na m maara ihe ha na-eche!
Ọ dị m ka ndị na-ede blọgụ kwesịrị ịgbaso iwu?
Ekwenyere m na 100% na Jason! Enweghị iwu ọ bụla. Ọ ga-adị ka Alexander Graham Bell na-ewepụta otu akwụkwọ banyere otu esi eji ekwentị afọ ole na ole mgbe o mechara ha. The blogosphere ka bụ nwata na ihe na-arụ ọrụ maka gị nwere ike ọgaghị arụ ọrụ maka ndị ọzọ. Ndị na-agụ akwụkwọ m amatala otú obi dị m mgbasa ozi mgbasa ozi na iwu bụ ụgha.
Anyị enweghị iwu… ihe anyị nwere, agbanyeghị, bụ ahụmịhe na ndị na-ajụ ajụ yana ịmata ihe na-arụ ọrụ na ihe anaghị arụ ọrụ ka anyị wee nyefee ndị ọzọ ihe ọmụma ahụ ka ha nwalee.
Ndị na-ede blọgụ Kwesịrị Ileghara Nchọta?
Chris Baggott fọrọ nke nta ka ọ si n'oche ya pụta mgbe Jason tụrụ aro ka ọ ghara ichegbu onwe ya banyere ọchụchọ. Ọ jụrụ otu ajụjụ ahụ na-atọ ụtọ, “Ọ bụ na ị naghị eme ndị mmadụ nsogbu site na ịghara inwe ọdịnaya gị… nnukwu ọdịnaya… achọtara?”. N'ezie Jason echeghị otú ahụ.
BTW: Nke a abụghị arụmụka niile - naanị mkparịta ụka siri ike banyere usoro ịde blọgụ. Jason rụrụ ọrụ dị egwu ma nwee nghọta doro anya banyere ihe kpatara na ọ chọghị ichegbu onwe ya banyere ọchụchọ. Ajụjụ Chris bụ n'ezie nke na-eweta ezigbo isi okwu. Ọ bụrụ na enwere ndị na - achọ ihe nọ ebe ahụ na - achọgharị… ha enweghị ike ịchọta gị, nke ahụ abụghị nsogbu?
Ọ bụ nsogbu maka engines ọchụchọ? Ka obu obu nsogbu gi?
Azịza m ga-abụ na ọ bụ nsogbu gị. Google nwere mmesapụ aka gabiga oke na iweta ngwa ọrụ niile dị mkpa maka ndị mmadụ ịghọta etu esi ebuli ma saịtị ha ma ọdịnaya ha. Google na-enye anyị ọkwa anyị site na isiokwu ma ọ bụ ahịrịokwu, yana nyocha ọchụchọ na isiokwu ndị a kwuru - na-achọpụta na ndị chọrọ ịsọ mpi n'ọsọ a kwesịrị ime mgbanwe ụfọdụ.
Akpọrọ m asị na chi dị iche iche nke Google dịka onye ọ bụla ọzọ. Ọ bụrụ na m nwere ike ide ọdịnaya dị mkpa ma enweghị m nchegbu banyere ịkpọ mkpụrụ okwu, okwu nha, na mkpokọta nke isiokwu dị na ọdịnaya m. M na-eme, ọ bụ ezie na ndị na-achọ azịza ndị a ga-ahụ ha na blọọgụ m! Ma chọta ha ha na-eme!
Ihe niile gbasara ikike! Ndi Social Media Explorer na-eme nke ọma? Ee n'ezie. Jason ọ na-enweta ndụmọdụ na ikwu okwu site na blọọgụ ya? Ee, ọ maara. Mana Jason nwere ike inweta ọtụtụ trafịkị na ajụjụ ọhụrụ site na ịchekwa ọdịnaya blọgụ ya. Anaghị m akwado ikwu okwu na-ekwekọghị n'okike - naanị ịtụkwasị ụfọdụ mkpụrụokwu na ahịrịokwu ebe ha abụọ nwere ezi uche ma na-adọta okporo ụzọ ọchụchọ. Dị Mfe ịde blọgụ maka SEO.
Lelee otú anyị blọọgụ ịrụ na ị ga-ahụ na m blog nwere a bit ọzọ iru… ma Jason bụ ihe ndị ọzọ aku mba na-elekọta mmadụ media ohere. Ọ bụ ezigbo onye ngosi (m ka na-amụ ihe) na ọkà okwu na-atọ ụtọ. Ọ kwesiri ekwesi nlebara anya. Echere m na ileghara ohere ahụ na-emebi ikike nke blog ya - na ọ naghị erite uru na ya.
MARA: M zigara Jason ọhụrụ m eBook n’anaghị akwụ ụgwọ. Enwere m olileanya na ọ gbanwere obi ya. 🙂
Ghostblogging bu ezigbo oru
Kedu oge ikpeazụ onye isi gị nwetara nkwalite maka ọrụ ha? Nọdụ ala n'akụkụ nkịtị mgbe ha na-arịgo elu ubube? Ka ọ bụ na ọ dị ntakịrị ntakịrị ka ị nyere aka tinye ha ebe ahụ? Nke ahụ bụ ihe Ghostbloggers do. Ghostblogging abụghị okwu ruru unyi ma ọ bụ ọ bụ ọrụ ruru unyi, ọ bụ ihe ịtụnanya. Nnukwu ghostblogger na-enyocha isi iyi ahụ wee dee ederede ahụ n'aha ha.
Echere m na m nwere oke buru ibu isi ime nke ahụ. Achọrọ m kredit ebe akwụmụgwọ tozuru!
Ọ bụ adịgboroja? Ọ bụ uzo? Ekwetaghị m na ọ bụ! Ọ bụrụ na m nọdụrụ wee gbaa gị ajụjụ ọnụ ma edere m azịza gị niile - mana edere m ya nke ọma ma nwee obi ụtọ, nke ahụ ọ na-eme ka ị bụrụ onye mmadụ? E nwere ụfọdụ nnukwu aha na blọgụ ụwa nke anaghị ede ederede nke aka ha - Achọrọ m ịgwa gị ozi ọma!
Ọ bụrụhaala na atụmatụ nke blọọgụ ndị ahụ bụ ozi gị, gịnị kpatara onye ọ bụla ga-eji lekọta onye ọzọ anya iji dee ya? You maara nke ahụ Ọ bụ onye ọcha dị afọ iri abụọ na asaa dere Star Obama? Nke ahụ ọ gbanwere echiche gị banyere Obama? Ọ bụ adịgboroja? Nke ahụ abụghị nke nghọta?
Echeghị m ya… Echere m na ọ bụ okwu ịtụnanya, enweghị m obi abụọ ọ bụla na Obama pụtara okwu niile o kwuru!
Tags: nsonaazụ azụmahịanchekwa emailarkgbasaaIwu nrimobile ngwa na-ewu ụlọReservations
Aug 14, 2009 na 4: 35 AM
Ọmarịcha mgbatị nke mkparịta ụka enyi na arụmụka nke Jason Falls kpatara na #blogindiana n'ụtụtụ a. Ihe omuma m na-aga n’ihu bụ na m kwenyere na gị, Jason na Chris. Ekwenyere m na ọ na-agaghachi imebi iwu. Ọ bụrụ na Jason achọghị ịma banyere ọchụchọ na nke ahụ na-arụ ọrụ maka ya, ya mere. Ọ bụrụ na ọ chọghị ịma onye na-agaghị achọta ya, ọ bụrụ na ọ bụghị ajọ enweghị mmasị, yabụ. Ọ bụrụ na ndị na-ede blọgụ ndị ọzọ, gụnyere onwe gị, Chris, mụ onwe m ma ọ bụ ndị ahịa m chọrọ ịbawanye uru nke ike ịde blọgụ maka SEO, egwuregwu na. Mee ka mkparịta ụka ahụ na-aga n'ihu, enwere m mmasị n'ịmụta site na mkparịta ụka ahụ na ndị na-ekere òkè na ya.
Aug 14, 2009 na 10: 29 AM
Doug, nwere ezi uche ma kwuo nke ọma. Ekwenyesiri m ike na Jason ga-ahụ njehie nke ụzọ ya site na iji nkwenye dị otú ahụ na-eche echiche. O nwere ike na-eche banyere ihe atụ kachasị njọ mgbe a bịara n'ịde blọgụ maka SEO na ghostblogging. Anyị nwere ike ikwenye na ya. Ọ dịka iji atụnyere azụmahịa, ihe mkpasu iwe ma ọ bụ ihe ọ entertainụ entertainụ, televishọn na nke Peter Francis ị mara-onye ma ọ bụ "tinye ozugbo n'egedege ihu." Anyị nwetara ahịa dị mma.
Aug 14, 2009 na 4:28 PM
Ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme ngwa ngwa… ka Bell edeghị otu esi eji ekwentị, nkwekọrịta nkwekọrịta ruru n'etiti ụlọ ọrụ ya na Western Union na enweghị ike iji ya maka telegraphy. Nke ahụ bụ ihe niile ọ dị mma ruo mgbe Thomas Edison chepụtara ikuku bọtịnụ ikuku (igwe okwu) nke mere ka okwu dị ogologo dị irè. N'ikwu okwu banyere okwu ndị isi ala, Edison mụtara ntakịrị banyere ịmegharị ndị nta akụkọ mgbe ọ kọwachara okwu Onye isi ala Andrew Johnson na Septemba 11, 1866 maka Associated Press. Ọ bụrụhaala na ndị ghostbloggers na-eme ọga ha ka ọ dị mma karịa ka ha bụ n’ezie, onye isi ahụ agaghị eme mkpesa.
Aug 16, 2009 na 6:46 PM
Ikwu banyere Bufee Ozi lol.
Enwere mmasị na ịgụ na President Andrew Johnson ma na-enweghị ike ihi ụra mgbe ọ na-aga n'ihu na-atụgharị uche n'uru nke ikwu okwu ya n'ihu ọha. TY Mike, ọ dịtụghị mgbe m tinyere aka na o nwere ike ịbụ na Thomas Alva nọ n'azụ ụda nkwupụta okwu nke Johnson.
Ga n’iru n’iru n’isiokwu nke taa; Okwesighi ka anyi chee na otutu ndi mmadu a ma ama putara otutu ego nke ozi ha. Ugbu a ka agwaala anyị na ịkọwapụta ihe dị adị n'oge Onye isi ala Johnson mana onye maara nke ọma mgbe amụrụ ọrụ ahụ.
M ga-ahapuru gi ajuju a na ajuju nkem… onye bu ezigbo onye edemede nke ndi Baibul. Odighi egosi m na ibu Chukwu ma obu Jisos, anyi nabatara ya dika “Okwu Chineke.” Ndị ahụ aha ọjọọ bụ́ GHOSTWRITER "S NA mbara igwe nọ na-arụ ọrụ ọbụna afọ 2,000 gara aga!
O yikarịrị ka m gaghị ehi ụra ngwa ngwa n'abalị a ka m bidolarị ịtụnanya ma Karr na-akwụ onye ghostwriter yana Chukwu kwụrụ ụgwọ ya.
Aug 18, 2009 na 1:04 PM
Eleghi anya ghostblogging bu oru di nma, mana onye jiri oru di otua adighi nma. Ma ọ dịkarịa ala, ọ naghị agwa ndị na-agụ ya eziokwu.
Aug 19, 2009 na 8:00 PM
Akwa post Doug. Ana m eche banyere okwu a ogologo oge ugbu a. N'ezie m dere post ụbọchị gara aga banyere mmekọrịta dị n'etiti mmekọrịta mmadụ na ibe ya na mkpa.
Adịghị m na blog Indiana, n'ihi ya enweghị m ebe a na-ekwu maka mkparịta ụka a. Echere m na ọhụhụ ọchụchọ dị ezigbo mkpa. Echere m na e nwere ihe atọ dị mkpa dị mkpa iji nweta ọhụhụ ọchụchọ, dịka ọ metụtara ịde blọgụ.
Nke mbụ bụ afọ ojuju. Mgbe blọọgụ m rutere ihe karịrị 100 posts amalitere m imeri ọtụtụ nyocha maka okwu dị iche iche. Enwere m ike ile anya nyocha ole ị ga - emeri ihe karịrị otu puku!
Nke abụọ bụ njikarịcha n'ime. Echere m na ọ dị oke mkpa iji jide n'aka na URL gị permalinks, mkpado aha, mkpado isiokwu, yana ọdịnaya zuru ezu nwere isiokwu gị ka enwere ike ịchọta posts gị na Google. Achọpụtara m na nke a dị mfe ịme ma ọ bụrụ na ị ghọta ihe ndị bụ isi.
Ihe nke ato dị mkpa bụ njikọta, na ekwenyere m na iwulite akara gị na saịtị ntanetị bụ site FAR ụzọ kachasị mfe iji mee ka ndị mmadụ jikọọ gị.
Ya mere ekwere m na Jason? Ee na mba.
Ọ bụ ihe ezi uche dị na m ka m leghara njikarịcha nke saịtị gị anya. Gini mere na ị chọghị ka Google chọta gị?!
Ma, echere m na ọ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka uche gị dịkwuo ike na mmekọrịta gị na ibe gị, ịnweta nkwanye ùgwù site na ndị na-ede blọgụ ibe gị, ịnweta ikike site na njikọ, nke ga-enyere gị aka njikarịcha ọchụchọ na ogologo oge.
Ihe na-ewe m iwe bụ mgbe ndị mmadụ na-eme dị ka naanị ihe mere ị ga-eji blọgụ bụ iji merie ọchụchọ. Ekwesịrị m ikwenye na ọ dị mkpa itinye ezigbo uche na atụmatụ mmekọrịta gị. Ọ bụrụ na ịde blọgụ ọtụtụ na iji isiokwu gị, ị ga-emeri ọtụtụ nyocha.
Ugbu a, Ghostblogging ọ bụ ezigbo ọrụ? N'ezie! Enwere ike ịgbakwunye? Mba, obughi sọsọ ma ị na-achịkwa ụlọ ọrụ ghostblogging. Ọ bụrụ na ị bụ onye na - ede blọgụ, ị ga - arụ ọtụtụ ọrụ ma yabụ ị nwere ike ịme nnukwu ego.